“Waan soo laabtay” – Sánchez oo baraha bulshada ugu dabaal dagay goolkii uu ka dhaliyay kooxdiisii hore ee Arsenal – Gool FM
“Waan soo laabtay” – Sánchez oo baraha bulshada ugu dabaal dagay goolkii uu ka dhaliyay kooxdiisii hore ee Arsenal
(Manchester) 27 Jan 2019. Weeraryhanka reer Chile iyo kooxda Manchester United ee Alexis Sánchez ayaa farxad weyn ka muujiyay kadib goolkii uu ka dhaliyay kooxdiisii hore ee Arsenal kulankii ay Jimcihii ku booqdeen Emirates Stadium.
Manchester United ayaa guul weyn ee 3-1 ah kala soo laabatay Emirates Stadium kulankii wareega 4-ta ay kula soo ciyaareen kooxda reer London ee Arsenal.
Hadaba Alexis Sánchez oo wali ku gudi jira farxada goolkii uu dhaliyay iyo guushii ay kala soo laabteen kooxda Arsenal ayaa wuxuu soo dhigay boggiisa Instagram-ka sawirkiisa wuxuuna soo raaciyay qoraal ah.
“Anigu waxaan ahay halyeey”.
Hase yeeshee, wuxuu wax ka bedelay qaabka uu ugu soo bandhigay sawirkiisa boggiisa Instagram-ka, isagoo soo dhigay sawir cajiib ah si uu u muujiyo inuu yahay geesi, wuxuuna sidoo kale qoraalkiisa soo raaciyay.
“Waan soo laabtay”.
Yeelkadeed, tan iyo mrkii uu Sanchez ku biiray Manchester United xilli ciyaareedkii 2017-2018, wuxuu ciyaaray 33 kulan oo kaliya isagoo dhaliyay 5 gool, weeraryhanka reer Chile ayaana kaga soo bilaawday kulankiisii ugu horeeyay ee tababare Ole Gunnar Solskjær ciyaartii ka dhacday Emirates Stadium.
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Girona vs Barcelona